Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဂမ်ဘာရီနှင့် တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ကျေနပ်ဟု အဖွဲ့ချုပ် ပြောကြား
ဂမ်ဘာရီနှင့် တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ကျေနပ်ဟု အဖွဲ့ချုပ် ပြောကြား	| သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၁ မိနစ်	ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီနှင့် ယနေ့ညနေပိုင်းက ထပ်မံ ဆွေးနွေးမှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်ဒီ) က ပြောဆိုလိုက်သည်။ အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်သည့် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်၊ သခင်စိုးမြင့်၊ ဦးသန်းထွန်းနှင့် ဦးညွန့်ဝေတို့သည် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီနှင့် ယနေ့ညနေ ၂ နာရီခန့်က ရန်ကုန်ရှိ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင် ၁ နာရီခန့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ဒီနေ့ ဆွေးနွေးတာကိုတော့ အန်ကယ်တို့ ကျေနပ်မှုရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမတခေါက်က တကယ့် မစ်ရှင် က အလုပ်ကို ဘာမှ မဆွေးနွေးလိုက်ရဘူး။ ဒီနေ့တော့ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ကို ဆွေးနွေးခွင့် ရတဲ့အတွက် အန်ကယ်တို့ဘက်က ကျေနပ်ပါတယ်” ဟု အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“သူတို့က ခရီးစဉ်မှာပါတဲ့ အချက် ၅ ချက် ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရင်တခေါက်က ဘာမှ ပြောခွင့်ဆိုခွင့် မရတာ။ ဒီနေ့တော့ အချိန်လည်း ရတယ်။ သီးသန့်လည်း တွေ့လို့ရတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲက မပြီးပြတ်သေးဘူး။ ထပ်တွေ့ဖို့လည်း သဘောတူထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာတွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ကို အန်ကယ်တို့ ထုတ်လည်း မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူး”အဓိက ဆွေးနွေးချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးတို့ ဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောသည်။သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ကမူ ကုလကိုယ်စားလှယ်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုပြုပြီး အတိုက်အခံ ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဆွေးနွေးပွဲသည် အားရကျေနပ်ဖွယ် မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ထိုနေ့က မစ္စတာဂမ်ဘာရီသည် စစ်အစိုးရ လိုလားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည့် ခွဲထွက် ဝံဿနု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားလူငယ်များ အဖွဲ့ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ယခုတပတ် တနင်္လာနေ့မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၅ ရက်ကြာ အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာသည့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် ရောက်သည့်နေ့မှာ စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် လေဘေးသင့် ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်မည့်ခရီးစဉ်ကို ရာသီဥတုကြောင့်ဟု ဆိုကာ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီတို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်ပိုင်းက အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရှိသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တွေ့ဆုံလိုမှုအား ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ယခုခရီးစဉ်မှာ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် လာရောက်သည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နအဖ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံရေး၊ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ဆောက်ရွက်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သူနှင့် အမြဲ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ ထားရှိရေးတို့အတွက် ဆောက်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မူ လုံခြုံရေးများ တဖန် တိုးမြှင့်ချထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကုလကိုယ်စားလှယ်ကို အတွေ့မခံသည့် သတင်းမှာ လူအများ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်စုလှူဒါန်း	ကော့မှူးတွင် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်များ ထားရန် ပြန်/ဆက်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒေါ်စု စီစဉ်နေ	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သင်္ကြန်ကာလ ဂျပန်ခရီးစဉ် စတင်တော့မည်	အသေးစား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေါ်စု ခရီးစဉ် မဖျက်	ဒေါ်စု ဟောမည့်စင်အတွက် ပြင်ဆင်စဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ လူ လေးဦး ဒဏ်ရာရ	လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်ကိစ္စ အစိုးရ တာဝန်မဲ့၊ မရိုးသားဟု UNFC ဆို	ဒေါ်စု ကြားဝင်ပေးမှု အကောင်းဆုံး မျှော်လင့် ဟု မသွဲ့သွဲ့ဝင်း ပြော	Who is Online
We have 104 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved